Times24 Nepal » कसरी गर्ने से’क्स ? हेर्नुहोस भिडियो
कसरी गर्ने से’क्स ? हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौं । नेपालमा यौ’नका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन । यौ’नका बारेमा जति चर्चा गर्दा या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ, या अति नै हलुका । फलस्वरुप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जनको विषय । फ्रायडले धेरैअघि मानिसका सबैजसो क्रिया यौ’नमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेका नेपाली बौद्धिक वर्गले पनि यसलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् ।
यो ग’म्भीर विषयमा मनोविज्ञ करूणा कुँवर भने प्रस्ट छिन् । १२ वर्षदेखि मनोविज्ञान त्यसमा पनि पारिवारिक त’नावका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेकी करूणा नेपालीको यौ’न मनोविज्ञान जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्छिन् । नेपालीहरूको यौ’न व्यवहार एवम् त्यसले सिर्जना गरिरहेको तनावले धेरै युगल जोडीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
जर्मन मनोवैज्ञानिक दोरोभि वेनरकी खास शिष्या करूणासँग नेपालीहरुको यौ’न मनोविज्ञानका विषयमा गरिएको कुरा । कसरी पार्टनरलाई से’क्सका निम्ति तयार गर्ने ?
त्यसोत प्रेमलापका निम्ति न त कुनै समय हुन्छ न त कुनै नियम । प्रेम गर्नेहरु सारा संसार बिर्सेर प्रेम गर्छन । एकापसमा आलिंगन गर्ने प्रेमीहरुले यो पनि विचार गर्दैनन् कि उनिहरु कहां छन् । अर्को तर्फ प्रेमलाप गर्नेहरु से’क्ससंग जोडिएको कुनैपनि काईदा कानून मान्दैनन् ।
तर धेरै पटक यस्तोपनि हुन्छ कि से’क्सको चाहना सहयात्री साथीको अ’निच्छालॆ पूर्ण नहुन सक्छ । त्यसैले पार्टनरलाई से’क्सका लागि कसरी तयार पार्ने भन्ने विषयमा गं’भीरतापूर्वक चि’न्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यौ’न क्षमता बृद्धिका लागि धेरै काईदाहरु छन् । यसको निम्ति व्यक्तिलाई परिस्थिति अनुरुप केहि यस्तो काईदाहरु अपनाउनु राम्रो हुन्छ जसबाट साथी खुशी भएर से’क्सका निम्ति तयार होउन् ।
यहां त्यस्ता केहि काईदाहरु बताईएको छ । खानपिन पछि दुबै जना एकार्काको समीप आउने प्रयत्न गर्नुस् , आफ्नो पार्टनरको गर्दनमा चु’म्नुस् , यदी प्रेयसी खाना तयार गर्दैछिन भने उनको पछि गएर उनलाई आलंगनमा लिनुस र उनको गला र कांधमा चु’म्नुस् , से’क्स गर्नु भन्दा पहिले दुबैले संगै नुहाउनुस र मसिनो स्वरमा आफ्नो प्रेमको प्रस्ताब गर्नुस् , आफ्नो सहयात्री पार्टनरलाई हल्का साबुन या तेलले मालिस गर्नुस । यस्को सुगन्धले वातावरणमा उ’त्तेजना ल्याउछ , उनलाई आफ्नो शरीरमा लपेटेर सुत्नको निम्ति आमन्त्रण गर्नुस् र भन्नुस म तिम्रो नजिक आउन चाहन्छु , आफ्नो पार्टनर साथीको जुन हात जसरी समाते पनि समात्नुस तर पुरा आत्मविश्वासका साथ समात्नुस् , आफ्नो पार्टनरलाई नम्रतापूर्वक आिलंगन गर्नुस र उनको आंखामा आंखा मिलाएर एकटक उनको आंखामा हेरिरहनुस् , केहि यस्तो नयां कुरा गर्ने प्रयास गर्नुस तपाईको साथीलाई त्यस्को कल्पना नै नहोस् ।
गरमा गरम सहवासका लागि उपरोक्त कुराहरुमा अवश्य ध्यान दिनुस् । यसले तपाईको से’क्स लाईफ निकै राम्रो हुन्छ । यो मान्नस कि यदि तपाईको से’क्स जीवन सफल छ भने तपाईको जीवनका समस्याहरुबाट पुरा दृढताकासाथ जुध्न सक्नुहुन्छ र तपाई तमाम् दि’क्दारी माथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंलाई फेमिली थेरापिस्ट भन्दा रहेछन् मनोविज्ञानभित्र फेमिली थेरापी कहाँ पर्दो रहेछ ?
मनोविज्ञान बृहत् विषय हो । संसारमा भएका सबै परिवर्तन मानव मनोविज्ञानद्वारा सम्भव भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यही मानवको एउटा महत्वपूर्ण पाटो उसको परिवार हो ।
एउटा मानिसको मनोविज्ञानले परिवारमा कसरी समस्या आउँछ र त्यसलाई कसरी स’माधान गर्ने भन्ने विषय फेमिली थेरापीअन्तर्गत पर्छ । अर्थात्, तपाईंको परिवारका सदस्यमा कुनै समस्या छ भने त्यो समस्याको स’माधान फेमिली थेरापिस्टले गर्न सक्छ ।
तपाईंसँग उपचारका लागि धेरै जोडी आउने गरेको थाहा पाएँ, जोडीका मुख्य समस्याहरू के(के रहेछन् ?
पुरूष होस् वा महिला, सुरुमा उहाँहरु आफ्नो पार्टनरको फलानो स्वभाव ठीक छैन, चिलानो व्यवहार राम्रो गर्दैनन् भनेर समस्या लिएर आउँछन् । कुरा गर्दै जाँदा मूल कुरा से’क्समा गएर अड्किन्छ । अर्थात्, कुनै पनि युगल जोडीमा केही समस्या छ भने कुनै न कुनै रूपमा त्यो समस्याको जड से’क्ससम्बन्धी उनीहरुको धारणा र व्यवहारमा प्रकट हुने गरेको मैले पाएँ ।
से’क्सकै कारण स’मस्या आएको जोडी कति पाउनु भयो, प्रतिशतमा भन्न सकिन्छ ?
९९ सय प्रतिशत । कुनै जोडी प्रारम्भदेखि नै खुसी छैनन्, वास्तवमै उनीहरूको विवाह इच्छा विपरीत भएको थियो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र पछि युगल जोडीमा जति समस्या आउँछन्, त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा यौन जोडिएकै हुन्छ । विश्वस्तरका अध्ययनले पनि यही भन्छ, मेरो प्राक्टिसमा पनि यही पाएकी छु ।
केही उदाहरण दिन सकिन्छ ?
धेरै जोडी विवाहको ५-७ वर्षपछि म कहाँ समस्या लिएर आउँछन् । त्यो बेला उनीहरुको सम्बन्ध लगभग टुटिसकेको हुन्छ । एक अर्कामा दोषारोपण गर्दा उनीहरू घर ढिला आउने, र’क्सी खाने, समय नदिने अथवा श्रीमतीले किचकिच गर्ने, अनावश्यक खर्च गर्ने भनेर दो’ष लगाउँछन् । तर विवाहको पहिलो वर्ष त्यही व्यवहार किन नराम्रो लागेन भनेर प्रश्न गर्यो भने उनीहरु मौन रहन्छन् । पहिलो वर्ष उनीहरुलाई त्यही व्यवहार नराम्रो लाग्दैन, का’रण उनीहरूको यौ’नसम्बन्ध त्यसबेला अहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो बेला एक अर्कालाई समय दिएका हुन्छन्, उनीहरूको रुप र व्यक्तित्वको बखान भएको हुन्छ । जसै विवाह पुरानो हुँदै जान्छ, ती क्रियाकलापमा कमी आउँछन्, अनि सम्बन्ध बिग्रन थाल्छ ।
नेपालीहरूको यौ’न क्रियाकलाप कसरी हुँदोरहेछ, स’मस्या के पाउनु भयो ?
सामान्यतया नेपालीहरुलाई से’क्स गर्न आउँदैन । से’क्स भन्नेबित्तिकै नेपालीको मनमा पुरूष लि’ङ्ग महिलाको यो’नीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरामा मात्र फोकस हुन्छ । जब कि यौ’नमा त्यो अन्तिम कुरा हो । त्यसअघि धेरै भन्ने कुरा, व्यवहार गर्ने कुरा, आ’कर्षण गर्ने कुरा यौ’नभित्र पर्छन् । त्यसबारे धेरैले ध्यान दिँदैनन् । मुख्य कुरा से’क्समा पुरूष हावी हुने गरेका छन् । अनि महिलाले पनि पुरूषका लागि आफूले सेक्रिफाइस गरेको ठान्छन् । समस्या यहीँबाट सुरू हुन्छ । वास्तवमा से’क्स कसका लागि, केका लागि भन्ने कुरा हामी प्रस्ट छैनौँ ।
नेपाली महिलाहरू से’क्समा रमाउन नसक्नुको कारण के पाउनु भयो ?
उनीहरुलाई सानैदेखि कुनै न कुनै रूपमा से’क्स ख’राब कुरा हो भनेर सिकाइएका हुन्छ । विवाहअघि से’क्स गर्नुहुँदैन, परपुरूषसँगको स’म्बन्ध पाप हो, पुरूषहरुको काम नै महिलालाई भोग्ने हो भन्नेजस्ता कुरा सुन्दा(सुन्दा से’क्स मेरो पनि आवश्यकता हो, त्यसमा मेरो सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै ओझेलमा पर्छ । पढेलेखेका महिलाहरुलाई से’क्सको बारेमा धेरै ज्ञान छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर अचेतन मनमा गढेका यस्ता कुराले उनीहरु खुलेर रमाइलो गर्न सक्तैनन् । तपाईंले कतिपय महिलाहरू से’क्सका बेला ना’ङ्गै हुन सक्तैनन्, बत्ती बालेर से’क्स गर्न मान्दैनन् भन्ने कुरा सुन्नुभएको होला । यसको मूल का’रण नै उनीहरुमा से’क्सप्रति भएको वितृष्णा हो । जब कि ना’ङ्गो हुनु से’क्सका लागि अनिवा’र्यजस्तै हो ।
नेपालका शहरी क्षेत्रमा महिला-पुरुष से’क्समा उदार हुँदैछन्, यससँगै से’क्समा विभिन्न प्रयोग भएको सुन्न पाइन्छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
शहरमा से’क्स टोयका सामग्री बेचविखन हुन थालेका छन् । प्रारम्भमा मलाई पनि से’क्स टोयमा युवा वर्ग मात्र जान्छन् कि भन्ने लागेको थियो, तर एक साताको अध्ययनमा के पाइयो भने से’क्स सपमा सबै वर्गका मानिस जाने रहेछन् । यसले नेपाली समाज से’क्समा उदार हुँदै गएको देखिन्छ । यद्यपि कस्तो से’क्स राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा दुई जनाबीचको यौ’न व्यवहारले छुट्याउने कुरा हो । यौ’न क्रियाकलापका बेला दुवै जना पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छन् भने त्यो क्रियाकलाप अरूका लागि अप्राकृतिक भए पनि राम्रो, सन्तुष्ट छैनन् भने हामीले भनेको प्राकृतिक पनि नराम्रो ।
अहिले गु’दा मैथुन, मुख मैथुनको कुरा पनि धेरै हुन थालेका छन्, तपाईंको अध्ययनमा के पाउनु भयो ?
विदेशमा विशेषगरी शिक्षित जोडीहरू से’क्समा समान सहभागिता खोज्छन् । कुनै पुरूषलाई मुख मैथुन रमाइलो लाग्छ भने त्यहाँ महिलाले पनि आफूलाई त्यही रुपमा आफ्नो सन्तुष्टिको आधार खोज्छिन् । यही कारण महिलाहरु पनि त्यति नै रमाइलो मान्छन् । नेपालमा भने महिलाहरुले आफ्नो सन्तुष्टिको अधिकारबारे त्यति सचेत छैनन् । आफ्नो पार्टनरले मुख मैथुन वा गु’दा मैथुनको कुरा गर्यो भने आफू ज’बरजस्तीमा परेको अनुभव गर्छन् । त्यसमाथि उनीहरुको मनमा से’क्स भन्नेबित्तिकै पुरूष लि’ङ्ग महिला यो’नीमा जाने कुरा मात्रै मनमा गढेको छ । से’क्समा मन नमिल्नु वा से’क्सप्रति दुवैको एकनासको शिक्षा नहुनु नै स’मस्याको कारण हो ।
किशोरीहरूमा हिस्टेरिया भन्ने एउटा परम्परागत रोग देखिन्छ, यसको कारण यौ’न असन्तुष्टि भन्ने गरिएको छ, खासमा यो के हो ?
किशोर वयमा अचानक बेहोस हुने वा अन्य क्रियाकलाप देखाउने रोग भएकाले हिस्टेरियालाई यौ’नसँग जोडिएको हो । वास्तवमा यो यौ’नसँग सम्बन्धित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । आजभोलि यसलाई कन्भर्जन डिसअर्डर भनिन्छ । पहिलो हिस्टेरिया भएका युवतीलाई विवाह गरिदिँदा यो रोग हराएको पाइयो । कुनै रोग विवाहपछि निको भएको देखेपछि यो यौ’न असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित हो भन्ने व्याख्या गरियो । आजभोलि यौ’न असन्तुष्टि मात्रै यसको कारण मानिएको छैन, जुनसुकै त’नावका का’रण पनि हिस्टेरिया हुन सक्छ ।
विवाहको केही वर्षपछि पुरुषहरू आफ्ना श्रीमतीको यौ’न चाहना कम भएको भन्ने गर्छन् । उनीहरू परस्त्री गमन गर्न थाल्छन्, फलस्वरूप परिवार विखण्डनको अवस्था आउने गरेको छ । यसको खास कारण के हो ?
विवाहको पहिलो वर्ष महिलाहरु पुरूषप्रति जति समर्पित हुन्छन्, त्यो समर्पण सन्तान जन्मिएपछि कम हुँदै जान्छ । उनीहरूको ध्यान आफ्नो श्रीमान्भन्दा छोरा-छोरीप्रति जान्छ तर पुरूषले श्रीमतीबाट त्यही व्यवहार चाहन्छ । त्यो नपाएपछि उसले बाहिर आँखा लगाउन थाल्छ । मसँग आउने धेरै समस्या पनि यसैसँग सम्बन्धित छन् । पारिवारिक समस्याको मूल जरो कतै न कतै यौ’नसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ ।
नेपालमा एकथरि महिला छन्, जसका लागि यौ’न लाजको विषय हो । तर अर्काथरि महिला यस्ता पनि छन्, जो खुला रूपमा से’क्सका कुरा गर्छन् र आफ्नो स्त’न नै आ’कर्षणको केन्द्र भन्छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
धेरै महिलाका लागि यौ’न लाजको विषय हो तर लाजको विषय भन्दैमा उनीहरु त्यसलाई प्रकट गर्दैनन् भन्ने होइन । राम्रो गाजल लगाएर वा चिटिक्क परेर आफ्नो यौ’निकता प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छन् । मानिस कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो चाहाना प्रकट गरिरहेको हुन्छ । मेरो विचारमा कसैले आँखामा गाजल लगाउनु र कसैले आधा स्त’न खुला छाड्नुमा खासै भिन्नता छैन । दुवैले बाहिरी मानिसलाई आफूतिर आ’कषिर्त गरिरहेका छन् । यहाँ महिला मात्र होइन, पुरूषले पनि कहिले फ्रेन्चकट दारी पालेर होस् वा आफूलाई सफाचट राखेर होस्, आफ्नो यौ’निकता प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ ।
आज तपाईंको पत्रिका सबैले पढ्छन्, किन ?
किनभने सबैलाई थाहा छ, यहाँ कुनै न कुनै रुपमा आफ्ना मनभित्रका कुण्ठा, समस्या वा गो’प्य कुरा राखिएका हुन्छन् । यौ’न भनेकै यस्तो कुरा हो, जो कसैले प्रकट गरोस् वा नगरोस्, सबैको आवश्यकताको कुरा हो, प्रकट गर्ने तरिका मात्रै फरक हो । रेखा थापाले कम वस्त्र लगाउँछिन्, त्यसकारण उनी सबैभन्दा बढी यौ’नेच्छा भएकी महिला हुन् र गाउँले युवती लजाउँछिन्, त्यसैले उनमा यौ’न इच्छा छैन भन्ने होइन ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरू किन यति हिप्पोक्र्याट भएका ?
किनभने हामीमा यौ’नका विषयमा शिक्षा नै भएन । आमाले हुर्कंदै गरेकी छोरीलाई, बुबाले उमेर बढ्दै गएको छोरासँग यौ’नका बारेमा खुलेर कुरा गरेनन् । उनीहरूले यसलाई लाजको विषय भने । शिक्षक-शिक्षिकाले पनि त्यसलाई गो’प्य भनिदिए । यसरी जोबाट यौ’नका विषयमा खुलेर कुरा आउनु पर्ने हो, उनीहरुबाट नै गलत भनेर लान्छना लगाएपछि विचरा यौ’न कलङ्कि’त हुने नै भयो । म सभ्य छु भन्नेहरूले यसलाई नराम्रो भन्न बाध्य भए । यो हाम्रो शिक्षाको दो’ष हो, हाम्रो संस्कारको दो’ष हो ।
अहिलेको नयाँ पुस्ता घरमा यौ’नलाई ग’लत भनेको सुन्छ, तर इन्टरनेट र साथीभाइका माध्यमबाट सबै कुरा सिकिसक्छ, यस्तो अवस्थालाई कसरी मिलाउने ?
यो ग’म्भीर अवस्था हो । बाहिरबाट आएको ज्ञान ख’राब पनि हुन सक्छ । घरबाट, विद्यालयबाट उचित तवरले यसलाई सिकाउँदै लैजाने हो भने मानिसले सही ज्ञान पाउँछ, नत्र विकृत व्यक्ति जन्माउँछ । धेरै वर्षअघि हामी केही मनोवैज्ञानिकहरूले थाइल्याण्डमा यही विषयमा चर्चा गरेका थियौँ । अहिले त्यो अवस्था प्रत्येक दिन बढिरहेको छ ।
(पत्रकार अश्विनी कोइरालाको पुस्तक ‘उनी’बाट)
से’क्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार से’क्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा से’क्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा से’क्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै से’क्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ ।
एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै से’क्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो । स्टमडीको अध्ययन अनुसार यो समयमा शरिरमा से’क्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा से’क्स गर्न सुरु गर्दा अति उ’त्तम हुन्छ । यतिमात्रै होइन विहानको से’क्सले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग पनि तिक्ष्ण हुने र दिनभरी ताजा महसुस हुने गर्दछ । इटलीमा गरिएको अध्ययनबाट विहान साढे ७ बजे से’क्स गर्दा उ’त्तेजना चाँडै हुन्छ ।
से’क्स गर्नुस् मोटोपन घटाउनुस्
अमेरिकाको एक सोध वैज्ञानिक र से’क्स सलाहकार डा. डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा से’क्सको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा. डेबीका अनुसार विहानको समयमा से’क्स गर्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ । यसैगरी अमेरिकी अर्का से’क्स सलाहकार जेन ग्रीनरका अनुसार विहानको समयमा से’क्स गर्दा राम्रो व्यायाम पनि हुन्छ । से’क्स एकप्रकारको व्यायाम पनि हो । उपयुक्त समयमा नियमित से’क्स गरे पनि मोटोपन घट्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
से’क्स कतिपटक गर्ने ?
से’क्स कतिपटक गर्ने भन्ने नापतौल छैन । आवश्यकता अनुसार से’क्स गर्न सकिन्छ । तर, भनिन्छ नी धेरै खायो भने चिनि पनि तितो हुन्छ । उपयुक्त समयमा र आफ्नो पार्टनरको मुड हरेर से’क्स गर्न सकिन्छ । त्यसैले एकसातामा तीनपटक से’क्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विहानमा से’क्स गर्दा महिला र पुरुष दुबैमा प्रजनन क्षमता पनि बढ्छ । लेखिका जेनी ट्रिप्लेटका अनुसार विहानमा से’क्स गर्दा महिलाहरुलाई धेरै शक्ति प्राप्त भएको महसुस हुन्छ ।
विहानको से’क्समा कसरी मजा लिने ?
विहानको समयमा पूजापाठ गर्ने, खाना पकाउने, अफिस जाने तयारी आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसको लागि प्रयाप्त समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने विहानमै से’क्स गर्दा राम्रो । विहानको समयमा से’क्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउदै म’जा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढि आत्मियता प्राप्त पाउने मात्रै होइन रमाइलो पनि हुन्छ ।
रातिमा से’क्स किन नगर्ने ?
विहानमा से’क्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला से’क्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर से’क्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा से’क्स गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको से’क्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।
कसरी गर्ने सेकसा
प्रकाशित मिति २१ बैशाख २०७७, आईतवार ०९:५४